FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Tenin’ny Mpitandrina
Ampitomboin’Andriamanitra amintsika mandrakariva anie ny Fiadanan’i Jesoa Kristy Tompontsika
Miarahaba antsika rehetra izay mitsidika ity tranokalam-pifandraisantsika FJKM Ankadindramamy Fahazavana ity.
Efa naseho hitantsika eto ny fandaharam-potoana tanterahintsika ato amin’ny fiangonana. Manentana antsika mba hitondra am-bavaka, ary indrindra hifanotrona amin’ireny fotoana rehetra ireny.
Mahakasina ny asa fananganana ny Trano Fiangonana vaovao dia isaorantsika Andriamanitra Ilay Tomopon’ny asa fa mandroso hatrany izany.
Isaorana isika rehetra, isam-pianakaviana, isan-tokantrano, isika tsirairay nitondra am-bavaka sy nanohana amin’ny fanatanterahana izany asa izany. Ilay Andriamanitra Tompon’ny zavatra rehetra anie hamaly fitia antsika.
Mandroso hatrany ny asa, Isan’ny tanjona tratrarina amin’ity taona ity ny haneho amin’ny tena endrika ny FACADE PRINCIPALE ( aty amin’ny araba akaikin’ny Hady teo aloha ) efa hita teo aloha ny sary. Indro misy sary vaovao amin’ny asa vita koa atolotra hojerentsika izany.
Kendrena araka izany ny hamita ny DALLE sy ny TOHATRA miakatra ao amin’ny Rihana ambony.
Ny hafatra ho antsika dia ndeha isika hiara-mientana , hifampivavaka, hifanome tanana amin’ny fanatanterahana izany. Ampiasao ny fanomezam-pahazoavana rehetra nomen’ny Tompo ano hiatrehana izany.
Marihina fa afaka mandray anjara amin’ny fanolorana anjara ianao . Eo ny TOLO-TANANA, ny BOATIN-DRAKITRA hangonina amin’ny volana Oktobra. Hisy koa anefa ny BOKY VOLAMENA hamangy antsika any an-tokatrano any. Azo raisina ao amin’ny Biraom-piangonana izany. Hitanao ao ny antsipirihin’ny asa mbola miandry antsika sy ny vinavinan’ny fitaovana mifanaraka amin’izao.
Hoy ny Tompo hoe :
ary ataovy ny trano, dia hankasitrahako izany, sady hankalazaina Aho, hoy Jehovah.
( Hagay 1 , 8 )